‘जोखिम मोलेरै राजनीतिक चलचित्र बनाएँ’
२०७६ असोज २३ बिहीबार १०:०३:००
दीपकराज गिरी नेपाली चलचित्र र हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रका लागि परिचित नाम हो । पछिल्ला केही वर्ष यता उनी सानो पर्दालाई छोडेर ठूलो पर्दामा केन्द्रित छन् । हरेक वर्ष उनी नेपाली चलचित्र रिलिज गर्दै आएका छन् । यो वर्ष दीपक ‘छ माया छपक्कै’ लिएर आउँदैछन् । अक्सर दसैंमा उनका चलचित्र रिलिज हुँदै आएकोमा यो वर्ष दीपक दसैं पछि पुगे । हिन्दी चलचित्र ‘वार’ आएपछि सोलो रिलिजका लागि दीपक दसैं लगत्तै असोज २४ गतेका लागि पुगेका हुन् । फुल कमेडीप्रधान चलचित्र बनाउने दीपक यसपटक राजनीतिक विषयलाई उठान गरेको बताउँछन् । चलिरहेको ट्रेन्डलाई पच्छ्याउनुभन्दा नयाँ ट्रेन्ड सेट गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक विषयलाई उठान गरेको उनी बताउँछन् । चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’का विषयमा केन्द्रित रहेर दीपकराज गिरीसँग बाह्रखरीका नरेश फुयाँलले गरेको कुराकानीः
चलचित्रको प्रचारका लागि तयार पारिएको गीत ‘बीच्च बीचमा’मा विवाद जस्तो देखियो । धेरैले आलोचना गरे नि ! के भन्नु हुन्छ ?
यसलाई विवाद नभनौं होला । म ढाँट्ने काम कहिल्यै गर्दिन । दुई अर्थी लगाउने शब्द हो नै । व्यक्तिको दिमाग, मन अनुसार बुझ्ने हो । हामी गाउँघरमा मेरो विवाह हुँदैछ भन्दैनौं । मेरो ‘ब्या’ हुन लाछ भन्छौं । यो वर्ष ब्या हुने हो भनेजसरी गीतमा पनि त्यस्तै शब्द प्रयोग गरेकै हो । दर्शकले जसरी बुझ्नु हुन्छ, उहाँहरुलाई नै छोड्दिऊँ भनेर छोड्दिएको हो ।
तपाईं आफैंमा क्रिएटिभ व्यक्ति तथा कलाकारका रुपमा चिनिनुहुन्छ । तपाईं जत्तिको व्यक्तिका लागि पब्लिसिटी गर्न यसरी दुई अर्थी शब्द तथा लय प्रयोग गर्नु आवश्यक पथ्र्यो ?
यो कुरा कसरी मलाई महसुस भयो भने हाम्रो ट्रेलर आयो । ट्रेलेर परम्परागत नबनाउँ भनेर हसाउने ट्रेलर नबनाएर अर्थपूर्ण ट्रेलर बनायौं । हाम्रो चलचित्र पोलिटिकल चलचित्र भनेर देखाउनु थियो । हसाउने ट्रेलर नभएपछि यो फिल्म यो पटक नजाने भयो भने ।
हाम्रो चलचित्रको मुख्य गीत ‘जुनको जुनेली’ एकदमै शब्द तथा लय भएको राख्यौं । त्यसैगरि छायांकन गर्यौं । साथीहरुसँग झगडा गरेर मैले त्यो गीत राखेँ । फास्ट नम्बर मात्रै चल्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै अग्र्यानिक गीत राखेँ । तर नेपाली चलचित्रको क्षेत्र र प्रवृत्ति सबैलाई थाहै छ । ल यो पटक यिनीहरुको चलचित्र पनि गयो भन्न थाले । ओहो कस्तो राम्रो टिपिकल गीत राख्नुभयो भन्नुपर्नेमा उनीहरु यसलाई नचलेको, लोकप्रिय नभएको रुपमा बुझ्छन् ।
तर, बजार त बजार हो । भोली एकाध मान्छेले भन्लान्कस्तो राम्रो भनेर बाँकीले ताली पिट्नेवाला छन् । सबैले चलचित्र सफल कि असफल भनेर हेर्ने त बक्सअफिस रिपोर्ट नै हो । चलचित्र सफलताको मापदण्ड कि अस्कर हुन्छ कि ग्राहक (दर्शक) हुन्छ ।
यसको परिणाम तपाईंले देखिहाल्नुभयो मैले अर्को गीत कस्तो बनाएँ ।
दसैं पछि ‘छ माया छपक्कै’ रिलिज हुँदैछ ।पब्लिसिटीमा दसैं अगाडि र पछाडि सहज हुँदोरहेछ ?
प्रयोग हो । ममा पनि धेरै आत्मविश्वास छैन । नेपाली चलचित्र क्षेत्रभित्रको राजनीति तपाईंलाई थाहै छ । चलचित्रको ब्रान्ड भ्यालु छ भने सुरुका तीन दिन कसैले पनि रोकेर रोक्न सक्तैन । अगाडि राम्रा चलचित्र दिनुभएको छ भने यसको चलचित्र राम्रो हुन्छ भनेर तीन दिन कसैले रोक्न सक्तैन । तीन दिनलाई समस्या छैन । तीन दिनपछि संसारका हरेक चलचित्र आफैं बोल्नुपर्छ । कन्टेन्ट नै बलियो हुनुपर्छ । म मेरो विश्वास पनि यही नै हो ।
तर यो पटक मैले पोलिटिकल फिल्म बनाएर रिक्स मोलेको छु । नेपालको इतिहासमा पोलिटिकल फिल्म हिट भएको छैन । तर म यो पोजिसनमा आइसकेपछि, रेकर्ड नै रेकर्ड मेरो नाममा भइसकेपछि, यति धेरै पैसा कमाइसकेपछि मैले पनि रिक्स नलिए कसले लिन्छ भन्ने आत्मबोध भयो । मेरो जिन्दगीको छैटौं चलचित्रमा आइपुग्दा मैले रिक्स लिनुपर्छ भन्ने लाग्यो । विस्तारै मैले मेरो चलचित्रलाई गह्रुङ्गो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसैले ‘छक्का पञ्जा–३’ देखि नै मैले आफ्नो चलचित्रलाई गह्रुङ्गो बनाउँदै लगेको छु । यसपटक अझै एक स्टेप माथि चढ्न खोजेको छु ।
जिन्दगीमा चलेको कुरापछि मात्रै दौडिनु हुँदैन ट्रेन्ड सेट पनि गर्दै जानुपर्छ भनेर रिक्स पनि लिएको छु । त्यति धेरै आत्मविश्वास पनि छैन मलाई तर केमा म विश्वास गर्छु भनेर चन्द्रमामा गएर घर बनाउने विषयमा पनि चलचित्र बनाउन सकिन्छ तर कथा भन्ने शैली गज्जव हुनुपर्छ ।
दसैंको विदा लगत्तै कलेज, कार्यालय सुरुभएपछि तपाईंको चलचित्र रिलिज हुँदैछ । त्यस्तो अवस्थामा तपाईंको चलचित्र हेर्न दर्शक आउलान् भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
तपाईंले जुन प्रश्न गर्नुभयो अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सारा मान्छेको दिमागमा भएको यो प्रश्न हो । मान्छे घर फर्किरहेको, काममा फर्किरहेको, स्कुल कलेज सुरु भएको अवस्थामा दीपकले चलचित्र लगाउँदैछ, यसको राम्रो छैन भनिरहेका छन् । तर मेरो चलचित्र चलेपछि के भन्छन् भने, दसैं पछि आनन्द थियो । केही तनाव थिएन त्यसैले चलचित्र हेरिदिए भन्ने समाज हो यो । दसैंको ह्याङ उतार्नु थियो, टीका लगाएको पैसा पनि थियो त्यसैले हेरे भन्ने समाज हो यो ।
तपाईं यो भन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो समाज नकारात्मक मात्रै छ !
यसमा तपाईं ढुक्क हुनुस्, म पनि ढुक्क छु । हाम्रो समाज असाध्यै नकारात्मक छ । कुनै पनि घटना भयो भने त्यसको सकारात्मक पाटो त पछि मात्रै आउँछ । सुरुमा नकारात्मक कुरा त आउँदैआउँदैन ।
घोडामा चढेर आउने कि डोर्याएर आउने भन्ने कार्टुन पक्कै पनि तपाईंले हेर्नु भएको छ । त्यो कार्टुन हाम्रो लागि मात्रै बनेको जस्तो लाग्छ । घोडा चढ्यो भने पशुमाथि अन्याय भयो, डोर्यायो भने माल पाएर के गर्नु चाल पाए पो भन्छ यो समाज ।
तपाईं मेरा अघिल्ला चलचित्र नै मेरा प्रतिस्पर्धी चलचित्र हुन्, कलेक्सन र गुणस्तरका हिसावले भन्दै आउनु भएको छ । अघिल्ला चलचित्रलाई कत्तिको प्रतिस्पर्धी ठानिरहनु भएको छ ?
दबाब धेरै छ । राजनीतिक रुपमा मलाई जतिसुकै रोक्न खोजे पनि सोलो रिलिज गर्ने जुन लक्ष्य थियो, त्यो पूरा भयो । तर चलचित्रको कन्टेन्टमा म विश्वास हुनैपर्छ । म त्यस्तो समयमा आउँदैछु जुन समय मान्छे घरबाट काममा फर्किने बेलामा, स्कुल कलेज लाग्दैछ । यस्तो बेला मेरो विषय र प्रस्तुती बलियो हुनुपर्छ भन्नेमा म विश्वस्त हुनुपर्छ । दबाब फिल गरेको छु । त्यसैले दसैंमा पनि मेरो ध्यान चलचित्रमा छ । ब्रम्ह्ले भ्याएसम्म सानो सानो कुरामा पनि ध्यान दिइरहेको छु ।
व्यावसायिक रुपमा कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
कन्टेन्ट बलियो छ । त्यसैले रिक्स लिएको छु । तर छक्का पञ्जाको रेकर्ड ब्रेक गर्छ भन्ने आश मैले गरेको छैन । ९–१० करोडको ब्यापार गर्ने अनुमान लगाएको छु । किन भने फुल कमेडी ‘छक्का पञ्जा’ हैन । हलमा गएपछि तपाईंले थाहा पाउनुहुन्छ । २०–२५ मिनेट लगातार कतै पनि हाँस्न पाउनुहुन्छ ।
चलचित्र निर्माणमा तपाईंको आफ्नै टिम छ । यसअघि तपाईं लगायतको कथा हुन्थ्यो । दीपाश्री निरौलाको निर्देशन हुन्थ्यो । तर यो पटक दीपेन्द्र लामालाई निर्देशकका रुपमा टिममा भित्र्याउनुभयो नि !
दीपेन्द्रजीले मलाई एक लाइनको स्टोरी सुनाउनु भयो । मलाई फिल्म लाइन मनपर्यो । उहाँसँग स्क्रिप्ट नै रहेछ, लिएर आउनुभयो । तर मैले उहाँलाई भने तपाईंको स्क्रिप्ट बलियो छैन तर थिम बलियो छ । त्यसैले तपाईंको स्क्रिप्ट हैन म थिम लाइन लिन्छु । तपाईं नै निर्देशन गर्नुस् । असिस्टेन्ट डाइरेक्टरका रुपमा रहिहाल्छु भनेँ । दीपेन्द्रजीलाई मैलै एक सेकेन्ड पनि छोडेको छैन । त्यसैले यो चलचित्र दीपेन्द्रका विगतका चलचित्र जस्तो हैन दीपक दीपाकै फिल्म जस्तो लाग्छ । यसमाढुक्क हुन म दर्शकलाई आग्रह पनि गर्छु ।